Blackjack မြေယာ-based - ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှာရေပန်းအစားဆုံး card ကိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်း. သငျသညျမှာအမှန်တကယ်ငွေ Blackjack ကစားနိုင်ပါတယ် mFortune မိုဘိုင်းကာစီနို. The game has simple rules that are easy to learn, ဒါပေမယ့်အောင်မြင်စွာကစားနိုင်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပါတယ်. ဒီအပျော်တမ်းနှင့်အတူ Blackjack လူကြိုက်များစေသည်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမား.
သငျသညျပျော်စရာအဘို့သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ငွေ mFortune ကာစီနိုမှာ Blackjack ကစားနိုင်ပါတယ်. သငျသညျ 10p သကဲ့သို့အနညျးငယျအဘို့အကစားနည်းထားနိုင်ပါတယ်.
Blackjack ၏ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပိုမိုနီးကပ်စွာတစ်ဦးလက်အောင်မြင်ရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 21 ဖဲဝေထက်, ကူးသွားမပါဘဲ (တွေဆီကနေ). သင်သည်သင်၏ကစားနည်းထားပြီးပြီ, သငျသညျနှစျဦးကတ်များထရင်ဆိုင်ရနှင့်ကုန်သည်ဆင်းတစ်ကဒ်ကိုမကျြနှာကိုဖွင့်တကဒ်ကိုမကျြနှာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်. အဆိုပါကစားသမားသည်ယခုအခါလက်ကစားရန်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏အလှည့်အဆုံးသတ်ရန်ရပ်နိုင်; နောက်ထပ်တကဒ်ကိုလက်ခံရရှိရန် hit; သင့်ရဲ့အလောင်းအစားနှစ်ဆနှင့်နောက်ထပ်တကဒ်ကိုလက်ခံရရှိရန်သင်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကတ်များအပေါ်ချနှစ်ဆတိုး; သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကတ်များအတွက်နှစ်ဦးတူညီကတ်များရှိပါကနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့ကစားနည်းသို့သင်၏လက်ကိုခွဲထွက်ဒါမှမဟုတ်ပွဲစားရဲ့ Up-Card ကိုတစ်ဦး Ace ကိုပါလျှင်အာမခံယူ.
အားလုံးကတ်များတန်ဖိုးရှိသည်နှင့်, ဤတန်ဖိုးများကိုသင့်လက်၌စုစုပေါင်းတန်ဖိုးရလဒ်အတူတကွဆက်ပြောသည်နေကြတယ်. Card များကိုနှစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့မျက်နှာတန်ဖိုးတဆယ်မှတဆင့်; မျက်နှာကတ်များတကျိပ်၏တန်ဖိုးရှိသည်နှင့်အေ့စ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တကျိပ်တပါးသောတစ်ဦးတန်ဖိုး, သင်၏လက်ကို၏ကျန်၏တန်ဖိုးအပေါ် မူတည်.. အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုလက် Blackjack အဖြစ်လူသိများသည်နှင့်ဤတစ် Ace ကိုမှာတန်ဖိုးထားတစ်ကဒ်၏ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးနှစ်ဦးကဒ်လက်ဖြစ်ပါသည် 10.
သင့်ရဲ့အလှည့်အဆုံးသတ်ပြီးပါက (သငျသညျတွေဆီကနေသွားဒါမှမဟုတ်သင်ရပ်), ဖဲဝေသူ၏လက်ကိုကိုင်ကစားလက်နှင့်သင်သည်မည်သည့်ကိုအနိုင်ပေးထွက်သည်ပေးဆောင်ခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသည်.
Phone ကိုကာစီနိုဂိမ်းများ | အိတ်ကပ် Fruity slot